I-United Kingdom i-Visa Waiver (i-EVW) | natvisa.com
I-United Kingdom i-EVW isicelo
URhulumente wase-United Kingdom uzise inkqubo ye-elektroniki yabahambi ukungena e-UK. Oku kwaziwa ngokuba yi-Elektroniki yeVisa Waiver. Kule nkqubo, inkqubo epheleleyo yesicelo ukuqala ekugcwaliseni ifom ukuya ekugqibeleni ekufumaneni i-EVW inokwenziwa kwi-Intanethi. Esi sibonelelo sikwi-Intanethi senze ukuba kube lula kwaye kube lula ukuba abahambi bandwendwele i-United Kingdom. Gcina ukhumbula ukuba le nkqubo ifumaneka kuphela kwizizwe ezithile. Ukuba umhambi akayonxalenye yenkqubo ye-UK Electronic Visa Waiver, kuyakufuneka baqinisekise ukuba umgaqo-nkqubo wokungena kubuzwe babo uyalandelwa.
Iindidi zeVisa zaseUnited Kingdom
Ukurhoxiswa kweVisa ngombane (i-EVW) Imeyli - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-180 enye Faka isicelo ngoku
Ukurhoxiswa kweVisa ngombane (i-EVW)
Fika e-United Kingdom
Kwinkqubo yesicelo se-EVW, abahambi kufuneka babonelele nge- Ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zabo zepaspoti, idilesi yendawo abaza kuhlala kuyo kuhambo lokuhamba olubandakanya umhla kunye nexesha lokufika nokuhamba. Iikopi eziprintiweyo zamaxwebhu kufuneka zenziwe ngokuchanekileyo nangokucacileyo ngaphambi kokufakwa kwifom yesicelo.
Xa kuziwa ekufumaneni i-visa kwi-intanethi, ukuba ne-imeyile id kubalulekile. I-id kufuneka ifikeleleke ukuze xa i-eVisa ithunyelwe, abafaki-zicelo kufuneka babenakho ukuvula i-id kunye nokukhuphela uxwebhu lokuhamba.
Abahambi kufuneka babe nepasipoti efanelekileyo kunye nabo xa besenza isicelo se-EVW. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Intlawulo yokuHlawula iVisa
Abafakizicelo abenza isicelo se-EVW kufuneka bahlawule imali eyi-30 yeepawundi zaseBritane. Intlawulo ingenziwa kwi-Intanethi.
Umenzi-sicelo makangenise ipasipoti esemthethweni kumagosa okungenelela ekufikeni e-United Kingdom. Ipaspoti kufuneka ibe yile isetyenziswayo xa kuzaliswa i-EVW.
Abafakizicelo kufuneka kwakhona baprinte kwi-EVW yabo kwaye bayazise amagosa ekufikeni kwabo.
Iinkcukacha ze-UK EVW
Yintoni i-United Kingdom yeVisa Waiver (EVW)?
Ukurhoxiswa kweVisa nge-elektroniki (i-EVW) luxwebhu olubaluleke kakhulu ekufuneka abahambi balufumane ngaphambi kokuba baye e-United Kingdom. Olu luxwebhu lokugunyazisa ukhenketho olukhutshwa ngurhulumente wase-UK kubemi abavela kumazwe athile akhethiweyo. Sebenzisa olu xwebhu, abahambi baya kufumana imvume yokungena kummandla wesizwe wase-UK kwaye bahlale apha iinyanga ezi-6. Iindwendwe ezikhetha i-EVW akufuneki zilandele inkqubo yesiqhelo yokufumana i-visa. Oku kuthetha ukuba akukho kutyelelwa kwindlu yozakuzo, ukuma kwimigca emide okanye ukulungisa idinga. Ngenkqubo ye-EVW endaweni, abantu baya konga ixesha elininzi.
Ungasifaka njani isicelo se-United Kingdom seVisa Waiver (EVW) kwi-Intanethi?
I-Visa Visa Waiver ivumela abemi bamazwe athile ukuba bangene e-United Kingdom, bengabinangxaki. Njengoko inkqubo yenziwa ngokupheleleyo kwi-intanethi, ilula kakhulu kwaye kulula. Ngamanyathelo ama-3 kuphela, abahambi banokugqibezela inkqubo ye-EVW:
Gcwalisa ifom yesicelo: Ukufumana i-EVW, abafaki-zicelo kufuneka bagcwalise ifom yesicelo kuqala. Ukufumana ifom kulula kakhulu njengoko kungekho mfuneko naphina. Abafakizicelo banokufumana ifom kwiwebhusayithi karhulumente. Le fom kufuneka ikhutshelwe, igcwaliswe ngokufanelekileyo kwaye emva koko kufuneka ingeniswe.
Ngenisa Amaxwebhu: Ukuzalisa ifom akuyigqibi inkqubo yokwenza isicelo. Abafakizicelo kufuneka bangenise amaxwebhu afunekayo nefom. La maxwebhu kufuneka atshekishwe, aze athunyelwe kunye nefom.
Bhatala imali ye-EVW: Inyathelo lokugqibela lenkqubo yesicelo se-EVW kubandakanya ukuhlawula umrhumo wevisa. Intlawulo yokundwendwela inokuhlawulwa kwi-Intanethi usebenzisa ikhadi elisebenzayo letyala okanye ikhadi lebhanki.
Nje ukuba la manyathelo mathathu alandelwe, isicelo se-visa senziwa. Kwiintsuku ezimbalwa, i-EVW evunyiweyo ithunyelwa nge-imeyile kumenzi-sicelo.
Umyalelo wabakhenkethi abafaka izicelo zokurhoxisa iVisa nge-elektroniki (EVW) ukuya eUnited Kingdom
Abemi bamazwe athile kuphela bavunyelwe ukuba basebenzise ukhetho lwe-Visa Visa Waiver (EVW). La mazwe yi-Kuwait, i-United Arab Emirates (i-UAE), iQatar ne-Oman. Abantu abavela kula mazwe akufuneki benze isicelo se-visa esemgangathweni yokungena e-UK.
I-EVW ikhutshwa kuphela ukulungiselela unyango, ukhenketho kunye nofundo okanye ishishini.
I-EVW ayinakusetyenziselwa ukutshata okanye ukufumana umsebenzi ohlawulelayo kunye nokuqeshwa elizweni.
Yintoni ukuNcitshiswa kweVisa nge-Elektroniki (EVW)?
Olu luxwebhu lokugunyazisa ukuhamba, olunikezwe ngurhulumente wase-United Kingdom kubemi bamazwe athile, ukuba bafumane i-EVW yabo kwi-Intanethi.
Umenzi-sicelo unokuyifumana njani i-EVW?
Ukufumana i-EVW, abafaki-zicelo kufuneka benze isicelo sayo kwi-Intanethi, bangenise amaxwebhu abo kwaye bahlawule umrhumo we-EVW. Nje ukuba kusetyenzwe, i-EVW iya kuthunyelwa ngeposi kwi-ID yomenzi-sicelo.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo se-EVW yase-United Kingdom?
Abafakizicelo kufuneka bangenise ikopi ekhutshiweyo kwiphepha lakho leencwadana yokundwendwela, idilesi yendawo abafake izicelo abagqibe kuyo yokuhlala, kunye nohambo lokuhamba.
Ithini imali yomrhumo we-EVW ekufuneka ihlawulwe?
Ukufumana i-EVW, abahambi kufuneka bahlawule iiponti ezingama-30 zase-british ngelixa besenza isicelo sayo.
Lithini ixesha lokuqinisekiswa kwe-United Kingdom EVW?
Emva kokuba kukhutshwe i-EVW, isebenza iinyanga ezi-6.
Ngawaphi amaxwebhu afunwa lundwendwe xa efika kwisikhululo senqwelomoya sase-United Kingdom?
Iindwendwe kufuneka ziveze ipasipoti yazo esemthethweni kunye ne-EVW evunyiweyo kwabasemagunyeni.
Umntu kufuneka enze isicelo nini kwi-EVW?
Kuyacetyiswa kubo ukuba bafake izicelo phakathi kweenyanga ezintathu ukuya kwiiyure ezingama-3 ngaphambi kokuba baceba ukuya e-United Kingdom.
Ngaba ukufumana i-EVW kuqinisekisa ukungena e-United Kingdom?
Hayi, i-EVW iqinisekisa ngokuzenzekelayo ukungena e-United Kingdom. Amagunya amasiko kwisikhululo seenqwelomoya anelungelo lokwala ukungena.
Mangaphi amangenelo avunyelweyo nge-United Kingdom EVW?
I-EVW eya eUnited Kingdom ivumela ukungena kwilizwe elinye.
Umfaki sicelo uza kuyifumana phi i-EVW?
Emva kokuba i-EVW iqhutyelwe phambili, iya kuthunyelwa nge-imeyile yomenzi wesicelo.